နေအိမ် » တိုက်ပွဲတွေ » Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters
ဖေါ်ပြချက်: ပြိုင်ပွဲတိုက်လေယာဉ် - TMNT ။ ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja Turtles ပြိုင်ပွဲတိုက်လေယာဉ်။ ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ်ပြိုင်ပွဲတိုက်လေယာဉ်အ TMNT ဝဠာကိုမှသူရဲကောင်းများနှင့်လူကြမ်းအဖြစ် featuring တစ်ဦး retro Arcade တိုက်ပွဲများဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ 1 ကစားသမား mode ကိုသို့မဟုတ် TOU တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်
ထိန်းချုပ်ရေး: Controller to Keyboard Mapping: Click on the red "X" button at the top right corner to close the controller-to-keyboard mapping setting. Try to remember the controller-to-keyboard mapping for Player 1 and Player 2. Player2uses NumPad. Please make sure your NumPad is unlocked. Tournament Fighters – TMNT. Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters. Teenage mutant ninja turtle tournament fighters isaretro arcade fighting game featuring heroes and villains from the TMNT universe. Participate in 1 player mode or tournaments and see how good you are. Updated with2players mode that allow you to battle with your friends on the same computer. As Always, Good Luck and Have Fun.
ကစား: 30,986 tag ကို: Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles games, Ninja Turtles games, Tournament Fighters, fighting games, SNES games, TMNT games, konami games, nintendo games
ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ်သည်မှောင်မိုက်မြို့
လီယိုနာဒိုကသူ Ninja ကိုလမ်းကိုပိတ်ဆို့ဖို့လိုလားတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူ၏လမ်းအပေါ်, မိမိမိတ်ဆွေများကယ်တင်ရန်သွားဖြစ်ပါတယ်။ လီယိုနာဒို၏ Ninja ကိုသတ်နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများကကယ်တင်ဖို့အားမိမိကအထူးကျွမ်းကျင်မှုကိုအသုံးပြုကြပါစို့။
Contra konami flash ကို
တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုကစားသမားများအတွက် Konami ဆန့်ကျင်ဂန္၏နောက်ထပ်ဗားရှင်း။ 8bits ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူဟောင်းဂိမ်း, ဒါပေမယ့်နေဆဲကစားရန်သိပ်ပျော်စရာပါပဲ။ ခုန်နဲ့ရိုက်ကူးဖို့, ရွှေ့ဖို့မြှား keys တွေကိုသို့မဟုတ် WASD ကိုသုံးပါ 1 နှင့်2သို့မဟုတ် J ကိုနှင့်ငွေကျပ်။
ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja လိပ်: နောက်ဆုံးအချပ် - tmnt
ပီဇာ၏နောက်ဆုံးအချပ်အဘို့အထုတ်တိုက်ဖျက်။ နှစ်ခုသာရွေ့လျား: ပိတ်ပင်တားဆီးမှုများနှင့်တိုက်ခိုက်။2ကစားသမား mode ကိုပါဝင်သည်။ အချိန်ကိုက်လက်ျာ Get နှင့်ပီဇာအနိုင်ရ။ ဆယ်ကျော်သက် Mutant Ninja Turtles: အဆိုပါနောက်ဆုံးအချပ် - TMNT
Lego Ninja ကိုလိပ်
သင်တစ်ဦးစစ်မှန်တဲ့နင်ဂျာဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား ထိုအခါလီယိုနာဒို, Raphael, Michaelangelo နှင့် Donatello join နဲ့ Master ခွဲထွက်အဖွဲ့နှင့်အတူစစ်မှန်သော Ninja ကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းရှိသည်။ ယနေ့ Ninja အသစ်တချို့သူတို့၏ Adventures အတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်သည့်ရွေ့လျားနဲ့ y ကိုလေ့လာသင်ယူရမယ်
Professional ကနပန်းတစ်အကြမ်းဖက်လှပကောင်းသော-ငွေကြေးထောက်ပံ့ပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်သူတို့စစ်တိုက်ခြင်းငှါအဘယ်သို့လေ့လာသင်ယူနိုင်တဲ့ဘယ်မှာ - သို့သော်အားလုံးနီးပါးပရော်ဖက်ရှင်နယ်နပန်းသမားများအားရိုးရှင်းတဲ့လမ်းရန်ပွဲနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုဘယျသူနညျး သင့်ရဲ့ပြိုင်ဖက်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့် w မှနောက်ကျောလမ်းကြားအပေါ်သွား
ဒီ Ninja လိပ်တောင်များနှင့်လွန်ကျူး ingrimes ကြားတွင်အန္တရာယ်များနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကျော်လွှားနှင့်အတူစီး Show ကိုစွမ်းရည်, လိမ်လည်လှည့်နဲ့နောက်ဆုံးဦးတည်ရာရှေ့တော်၌နှစ်ဦးစလုံးရထားဘီးနှင့်အတူတက်ကျသွားတက်အဆုံးသတ်ခံရဖို့မသတိပြုရကြမည်။
ဒီစိန်ခေါ်ချက်အတွက်ဗိုလ်ကြီးအမေရိက, Spiderman နှင့်အခြားသူများတူစူပါစိတ်လှုပ်ရှားစရာရန်ပွဲကိန်းဂဏန်းများကိုမီးပေါ်မှာလက်စွပ်တိုက်ခိုက်ရေးအတွက်မဆိုအားသာချက်ယူသူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုသုံးစေကတိပေးသင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ပါ
နဂါး Mortal Kombat တိုက်ပွဲများ 3d
ဒီတရုတ်ကွန်ဖူးပုံစံဂိမ်းထဲမှာရန်သူတစ်ဦးတပြင်လုံးကိုစည်းသော်လည်းသင့်ရဲ့လမ်း Fight ။
သင့်အဆင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်, လူစိမ်းရန်သူလှိုင်းတံပိုးကိုခုခံကာကွယ်ရန်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေ, ဂုဏ်အသရေဘို့စစ်တိုက်ခြင်း, ငါ၏ဂဟေဆက်!
သင့်ကိုယ်ပိုင်စရိုက်လက္ခဏာ ဖန်တီး. ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး benders စိန်ခေါ်! သင့်ရဲ့လူမြိုးတစျမြိုးကိုရှေးခယျြနှင့်ဤအဆုံးစွန်ပြိုင်ပွဲ 20 benders ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တယ်။ သငျသညျမှကံကောင်းပါစေ bender ကျွမ်းကျင်!
တရုတ်ကွန်ဖူးရုပ်ရှင်ရုံအပေါ်အခြေခံပြီး 1v1 တိုက်ပွဲများဂိမ်း။ နောက်ဆုံးမှာအားကြီးသောနဂါးမဟာတိုကျခိုကျဖို့အကြိမ်ကြိမ်ပြိုင်ဘက်အားဖြင့်သင်တို့၏လမ်းကိုတိုက်
Help The Hero to survive and find safety inaold school arcade action. Features: -6challenging levels (space, desert and forest themed) - Survival mode -5types of enemies (zombes, aliens, slimes and bugs) - Upgrade system (spend bonus money to
ဂိမ်းကစားခြင်းကိုကြီးစွာသောအချိန် Ave Arcade mode ကိုသို့မဟုတ်နှိုင်းယှဉ် mode မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရွေးချယ်မှု၏ဇာတ်ကောင်ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ သင့်အနေဖြင့်ပြိုင်ဘက်ရိုက်နှက်နှင့်ရမှတ်ဝင်ငွေရန်ရှိသည်။ ဒီအထူးသဖြင့်အရေးယူ based ဂိမ်းက c များအတွက်ဂိမ်း apt ကဂရပ်ဖစ်ကာတွန်းကားဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါစက်မှုကမ္ဘာကြောက်မက်ဘွယ်သောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကတိုက်ခိုက်ခဲ့သည် mad.They သွားပြီရှိသမျှကိုစက်ရုပ်စက်မှုပြည်ထောင်စုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး၏အရင်းအမြစ်ဖယ်ရှားပစ်ရန် chaos.In အမိန့်သို့ကမ္ဘာတဝှမ်း, ထိန်းချုပ်မှုထဲကအခွအေနဖျက်ဆီးထိန်းချုပ် wreaking မှဘာသာရပ်မဟုတ်
အ coliseum ၏သဲ
သင့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုစိန်ခေါ်မယ်နှင့်ဤ action-ထုပ်ပိုး gladiator ဂိမ်းထဲမှာ Coliseum အဆင့်၏ထိပ်မှသင့်ရဲ့လမ်းတိုက်ဖျက်!
ဒါဟာသင့်အကြိုက်ဆုံးပြိုင်ဖက်ကိုရှေးခယျြဒီဂန္ထဝင်တိုက်ပွဲဂိမ်း Mortal Kombat အပေါင်းတို့၌မိမိအခွက်တဆယ်ကိုပြသခြင်းနှင့်သေခြင်း၏လက်စွပ်အကြားဖို့အတှကျအခြိနျပါပဲ။ သူတို့အဘယ်သူသည်အစစ်အမှန်ပေါက်ဘော်တော်ကိုပြသသည်သင်တို့တဘက်၌အခွင့်အလမ်းရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုကွပ်မျက်ရန်သင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုသုံးပါ
ဒီမေတ္တာဂိမ်းဂျပန်နိုင်ငံသည်လူများတို့အားဆက်ကပ်အပ်နှံသည်။ သူတို့အားငြိမ်သက်ခြင်း၌ကြွင်းသောအရာပျောက်ဆုံးခဲ့ကြနိုင်ပါစေတဲ့သူ။ nana korobi, ya oki ။ သူတို့ကိုသင်မကြာသေးမီကဘေးအန္တရာယ်ကနေအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေကိုကူညီဂျပန်လူအဖို့မနှမြောနိုင်သမျှလှူဒါန်းခဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးပါ။